Ny Mpitsara any An-danitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Ilay mpitsara any an-danitra
Rehefa fantatsika fa velona sy manenona ary ao amin’i Kristy isika, dia ao amin’Ilay nahary ny zavatra rehetra sy nanavotra ny zavatra rehetra ary tia antsika tsy misy fepetra (Asa 1.2,32; Kolosiana 1,19-20; John 3,16-17), dia afaka manilika ny tahotra sy ny fanahiana rehetra momba ny “izay ijoroantsika eo anatrehan’Andriamanitra” isika ary manomboka tena miala amin’ny fahatokian’ny fitiavany sy ny heriny mitarika eo amin’ny fiainantsika. Vaovao mahafaly ny filazantsara, ary raha ny marina dia vaovao tsara izany, tsy ho an’ny olom-bitsy ihany, fa ho an’ny olona rehetra, tahaka antsika koa. 1. Johannes 2,2 vakio.
Mampalahelo nefa marina fa maro ny mino mino no matahotra ny fitsarana farany. Mety ho ianao koa. Na izany aza, raha tsy manao ny marina amin'ny tenantsika isika, dia fantatsika rehetra fa tsy ampy amin'ny rariny tonga lafatra Andriamanitra amin'ny fomba maro. Fa ny zava-dehibe indrindra tsy maintsy tadidintsika momba ny fitsarana dia ny maha izy ny mpitsara. Ilay mpitsara mpiahy amin'ny fitsarana farany dia tsy hafa afa-tsy i Jesoa Kristy Mpanavotra antsika!
Fantatrao fa ny Bokin'ny Apokalipsy dia milaza zavatra maro momba ny Fitsarana farany, ary ny sasany amin'izany dia mety mahatahotra rehefa mieritreritra ny fahotantsika isika. Saingy misy fanambaràna be dia be momba ny mpitsara ny fanambarana. Nantsoiny hoe "tia antsika sy manafaka antsika amin'ny fahotantsika amin'ny alàlany". Jesosy dia mpitsara izay tia ny mpanota izay tena tsarainy ka maty ho azy ireo izy, ary nitsangana teo amin'ny toerany sy ho azy ireo! Tsy vitan'izany fa nitsangana tamin'ny maty ho azy izy ary nitondra azy ho eo amin'ny fiainana sy ny fanatrehan'ny Ray, izay tia azy toa an'i Jesosy. Manampy antsika amin'ny fanamaivanana sy fifaliana izany. Koa satria i Jesosy mihitsy no mpitsara, dia tsy misy antony tokony hatahorantsika ny fitsarana.
Tena tian’Andriamanitra ny mpanota, anisan’izany ianao, ka ny Ray dia naniraka ny Zanaka hijoro ho an’ny olombelona sy hitaona ny olona rehetra, anisan’izany ianao, hanatona Azy.2,32) amin’ny alalan’ny fanovana ny saintsika sy ny fontsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Tsy mitady zavatra tsy mety ao anatinao Andriamanitra mba hanakanana anao tsy ho ao amin’ny fanjakany. Tsia, tena maniry anao ao amin’ny fanjakany izy ary tsy mitsahatra misarika anao ho amin’izany lalana izany.
Mariho ny famaritan’i Jesosy ny fiainana mandrakizay ao amin’io andalan-teny ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona io: “Izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, fa Hianao irery ihany no Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy, izay nirahinao.” (Jaona 1.7,3). Tsy sarotra na sarotra ny mahafantatra an’i Jesosy. Tsy misy fihetsehana tanana miafina hazavaina na piozila hovahana. Izao fotsiny no nolazain’i Jesosy: “Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.” ( Matio 11,28).
Resaka mampitodika ny saina ho azy fotsiny. Nanao izay rehetra azo atao izy mba hahatonga anao ho mendrika. Efa namela ny helokao rehetra Izy. Izao no nosoratan’ny apostoly Paoly: “Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika.” ( Romana. 5,8). Andriamanitra dia tsy miandry mandra-pahatongantsika ho ampy famelan-keloka sy hahatonga antsika ho zanany - efa nananany.
Rehefa mitodika any amin'Andriamanitra sy mametraka ny fitokisantsika an'i Jesosy Kristy dia miditra amin'ny fiainana vaovao isika. Mitoetra ao anatintsika ny Fanahy Masina ary manomboka manala ny sosona matevina amin'ny maha-mpanota antsika - fahazarana manota, toetra, ary fomba fisainana - manova antsika ho ao anaty ka ho tahaka ny endrik'i Kristy.
Maharary indraindray, fa manafaka sy mamelombelona ihany koa. Vokatr'izany dia mitombo amin'ny finoana isika ary lasa mifankahalala sy tia ny Mpamonjintsika. Ary arakaraka ny fantatsika momba ny Mpamonjintsika, izay mpitsara ihany koa isika, dia vao mainka matahotra ny fitsarana. Raha mahalala an'i Jesosy isika, dia matoky an'i Jesosy ary afaka matoky tanteraka ny famonjena antsika. Tsy ny momba ny faniriantsika tsara no jerena; tsy izay mihitsy no antony. Izy io dia efa miresaka momba ny fahatsarany hatrany. Vaovao tsara izany - ny vaovao tsara indrindra izay maheno!